MW CMC Oo Kulan Layeeshay Gudoomiyeyaasha Gobolada - Cakaara News
MW CMC Oo Kulan Layeeshay Gudoomiyeyaasha Gobolada
Jigjiga(CN) Arbaco, 3da February 2016, madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa saaka kulan kulayeeshay hoolka shirarka ee xafiiskiisa gudoomiyeyaasha gobolada deegaanka, hogaamada nabadgelyada heer deegaan iyo kuwa gobolada, maamul magaalooyinka iyo hogaaminta ciidamada deegaanka.
Kulankan ayuu madaxwaynuhu uga waramay heerarka kaladuwan ee hogaamintan xaaladaha waxqabadka horumarineed iyo kuwa nabadgelyo ee deegaanka laga fulinayo goob kasta in la isku qiimayn doono oo uu jiro foom gacantaada iskuqiimee ah oo shaqsi kasta gacantiisa kubuuxinayo iyadoo foomkan ay horay gacantooda ugu buuxiyeen hogaaminta deegaanku iyagoo shaqsi kasta isagu waxqabadkiisa qiimaynaya. Wuxuuna madaxwaynuhu intaa raaciyay inay tahay in heerarka kaladuwan ee hogaamintan ay iyana gacantooda isku qiimeeyaan oo ay foomkan buuxiyaan, iyo in buuxinta foomkani leeyahay gudi sare oo si cadaalad ah u kala saari doonta xaqiiqada waxqabadka iyo dhaliisha qof waliba sheegtay. Madaxwaynaha ayaana hadalkiisa kusoo xidhay in foomkani leeyahay qaab loo buuxinayo iyo darajaynba. Tusaale ahaana dadku ay isugu jiraan qof qabtay wixii laga rabay, qof dhaafiyay wixii laga rabay, qof taakulayn ubaahan iyo qof kahoos maray wixii laga rabay.
Hadaba, heerarka kaladuwan ee hogaamintan ayaa si wayn u soo dhawaysay qiimayntan cadaalada kusalaysan ee shaqsi kasta uu isagu waxqabadkiisa iyo dhaliisha uu leeyahay uu gacantiisa kubuuxinayo. Waxayna soo dhaweeyeen inay si daacad ah uu shaqsi kasta isagoo karun sheegaya waxqabadkiisa iyo dhaliishiisa uu u buuxinayo foomkan.